Taliban vonona hamerina ny asan'ny seranam-piaramanidina Kabul 'ao anatin'ny andro vitsivitsy'
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Taliban vonona hamerina ny asan'ny seranam-piaramanidina Kabul 'ao anatin'ny andro vitsivitsy'
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
n) Taliban vonona hamerina ny asan'ny seranam-piaramanidina Kabul 'ao anatin'ny andro vitsivitsy'
Vitan'ny Etazonia ny famindrana ireo sivily tany Kabul sy ny iraka nampanaovina azy rehetra tany Afghanistan tamin'ny 30 Aogositra.
Taliban hanombohana indray ny asany ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Khamid Karzai.
Ny seranam-piaramanidin'i Kabul dia hiasa ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Taliban dia naka an'i Kabul sy Afghanistan iray manontolo tamin'ny 15 Aogositra.
Nanambara ny solontenan'ny Taliban androany fa hamerina ny asany ara-dalàna ao anatin'ny andro vitsivitsy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai.
“Vonona ny hanohy ny asany ny seranam-piaramanidina izahay. Hanao izany ao anatin'ny andro vitsivitsy isika, ”hoy i Anas Haqqani, mpikambana ambony ao amin'ny Taliban tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy.
Nofaritan'i Haqqani ho fisehoan-javatra “lehibe” ny fisintahan'ny tafika amerikana avy any Afghanistan ary nantsoina hoe andro izay nifaranan'ny andro fialantsasatra ho andro "tantara" iray.
Vitan'ny Etazonia ny famindrana ireo sivily tany Kabul sy ny iraka nampanaovina azy tany Afghanistan tamin'ny 30 aogositra. Ny fanapaha-kevitra hampitsahatra ny asan'i Etazonia tany Afghanistan izay nanomboka tamin'ny Oktobra 2001 ary nanjary fampielezan-kevitra amerikana lava indrindra any ivelany dia nambaran'ny filoha Joe Biden tamin'ny 14 aprily 2021.
Taorian'ny fanambarana ity fanapahan-kevitra ity dia nanomboka nanafika ny tafiky ny governemanta Afghan ny Taliban. Tamin'ny 15 Aogositra, niditra an-tsokosoko tao Kabul ireo mpiady Taliban nefa tsy tojo fanoherana akory, ary nahazo fanaraha-maso feno ny renivohitra Afghana tao anatin'ny ora vitsivitsy.
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Hamid Karzai, fantatra ihany koa amin'ny hoe HKIA, dia 3.1 kilometatra miala ny afovoan-tanàna Kabul any Afghanistan. Izy io dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina iraisampirenena lehibe indrindra amin'ny firenena ary ho iray amin'ireo toby miaramila lehibe indrindra, mahazaka fiaramanidina zato.
Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Hamid Karzai dia nantsoina hoe Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Kabul ary eo an-toerana amin'ny seranam-piaramanidina Khwaja Rawash, na dia mbola fantatry ny kaompaniam-pitaterana sasany amin'ny anarana farany aza izany. Ny seranam-piaramanidina dia nomena ny anarany ankehitriny tamin'ny 2014 ho fanomezam-boninahitra ny filoha teo aloha Hamid Karzai.